Shiinaha Soft PVC Pencil Toppers warshad iyo soosaarayaasha | SJJ
Qalimaanku waa aaladaha wax lagu qoro, wax lagu sawiro ama lagu abuuro, kuwa jilicsan ee dusha sare ee qalinka ee PVC ayaa ah aaladaha ka dhigaya qoraalkaaga, sawirkaaga iyo abuuristaada mid aad u xiiso badan oo kaamil ah.
Qalinku waa aaladaha wax lagu qoro, wax lagu sawiro ama lagu abuuro abuurka, jilicsan Dusha sare ee qalinka PVCwaa aaladaha ka dhigaya qoraalkaaga, sawirkaaga iyo abuuristaada mid xiiso badan oo kaamil ah. Ma aha oo kaliya carruurta laakiin sidoo kale dadka waaweyni waxay jecel yihiin tirooyinka quruxda badan ee ay abuureen magacyada waaweyn ee caanka ah sida Disney iyo kuwa kale. Our jilicsanDusha sare ee qalinka PVCwaxaa lagu samayn karaa tirooyinkan quruxda badan ee kala duwan, qaababka iyo midabada. Waxaa loo isticmaalaa hadiyado dhiirrigelin, xusuus -qor, qurxin, xayeesiin iwm. Dusha sare ee jilicsan ee PVC ayaa si fiican u xayeysiiyay nafta sumcadaha caanka ah, sidoo kale waxay ilaaliyaan qalimaanta iyo isticmaalaha sidoo kale. Qaar ka mid ah dusha sare ee qalinka PVC -ga ayaa leh shaqada tirtirka. Waxay ka caawiyaan adeegsadayaasha inay si fiican u nadiifiyaan qoraalka, sawiridda iyo wax kasta oo la abuuray, oo ay ka dhigaan kuwo kaamil ah.
Qaababka, naqshadaha iyo cabbirrada macaamiisha waa la soo dhaweynayaa. Waxaan u samayn doonaa farshaxanka warshadda oggolaanshahaaga ka hor shaybaarrada ama soo -saarka, isku day sida ugu fiican si aad u muujiso faahfaahinta talooyin xirfadeed, iyo in aan ku dadaalno ganacsi badan labadeenna.
Ujeeddooyin: Ku dhinta 3D buuxa, naqshadaha iyo cabbirka waa la beddeli karaa.
Dhameystirka: Logos waa la daabici karaa, la xardhi karaa, Laser ayaa la xardhay iyo wixii la mid ah
MOQ: 500 pcs naqshad kasta
Hore: Jilibyada qaboojiyaha PVC ee jilicsan
Xiga: Biladaha PVC ee jilicsan
3D Topper qalin
Qalinka Qalinka Midabka
Toosiyaha TPR ee gaarka ah